Saamaynta Digg: Mawduuc Wanaagsan + Isku Xidhka Bulshada = BADAN HITS | Martech Zone
Saamaynta Digg: Mawduuc wanaagsan + Isku xidhka bulshada = BIG HITS
Khamiis, Juun 27, 2006 Khamiis, Janaayo 5, 2017 Douglas Karr
Markii aan ku dhacay muuqaal aad u qosol badan oo ah Bill Gates iyo Napoleon Dynamite toddobaadkan, waxaan go'aansaday inaan sameeyo tijaabo yar. Aniga oo aan ogeyn in uu ahaa filim xoogaa da 'ah, ayaan ku dhajiyay boggeyga oo waxaan u gudbiyay gelitaanka blog-ka Ninth. Sida laga soo xigtay boggooda:
Digg waa degel websaydh ka kooban waxyaabaha bulshada ka kooban. Waayahay, markaa waa maxay micnaha taa micnaheedu? Hagaag, waxkasta oo kujira digg waxaa soo gudbiya bulshada isticmaasha godka (taasi adiguu ahaan lahaa). Kadib markaad gudbiso waxyaabaha, isticmaaleyaasha kale ee loo yaqaan 'digg users' waxay aqriyaan soo gudbintaada waxayna qoddaan waxa ay ugu jecel yihiin. Haddii sheekadaadu ruxdo oo ay hesho diggag ku filan, waxaa loo dallacayaa bogga hore ee malaayiinta qof ee soo booqda godka ah si ay u arkaan.
Waa qabow oo waa balwad. Waxyaabaha wanaagsan ayaa kor u kacaya… kuwa kale ayaa si fudud u dhacaya. Sidoo kale, waxaa jira dhinac bulsheed maadaama aad arki karto waxa saaxiibbadaada qodanayaan iyaguna ay arki karaan waxaad qodayso. Fudud oo fiican. Netscape waxay ka shaqeyneysaa garaacis u gaar ah (dhowaan jabsaday qodayaal). Iyo bog kale oo 'faallo bulsheed' ayaa la bilaabay toddobaadkan, Diigo. Waa wax yar oo cakiran, laakiin waxay kuu oggolaaneysaa inaad uga tagto qoraalo dheg dheg leh bogagga ay saaxiibbadaada ka akhrisan karaan haddii ay xubno ka yihiin Diigo sidoo kale
Sikastaba… Waxaan kudaray soo gelitaanka godka habeenka axada. Subaxnimadii Isniinta, degelkeygu wuu daaqay, futay oo dhintey sababtoo ah mugga badan ee ku dhuftey muddada gaaban. (Boggu runti okay wuu fiicnaa, injineeradaydu waxay ii sheegaan in WordPress waxyar oo taabasho ah mugga sare laga heli karo). Waa kuwan stats:
A dhawaan gelitaanka ka yimid Seth Godin wuxuu saadaaliyay caan ka noqoshada 'waji ka waji' fiidiyow shaqsiyeed oo shabaqa garaacaya. Wuxuu sheegayaa inaysan ku saabsaneyn shirkadaha inta badan dadka. Laakiin dadku WAA shirkado, saw maaha? Waxaan galiyay muuqaal gabow ah oo qosol badan oo Bill Gates ah oo kuyaala goobtayda oo muggaygu wuxuu koray habeenki in kabadan 1000%. Marka - malaha waxay ku saabsan tahay dadka… dadka ka dambeeya shirkadaha.
Si kastaba ha noqotee, tani waxay tilmaameysaa awoodda isku xirnaanta bulshada, iyo sidoo kale xawaaraha isku xirka bulshada ee shabakadda. Waxaa laga yaabaa inaan u wici karno saameynta 'Digg'. Sida iska cad, markaad eegto tirooyinka, isku xirka bulshada ee shabakadu waa mid xoogan oo aan la iska indha tiri karin. Waxaan kaliya u kashifay boggeyga in kabadan 2,500 oo qof 48 saac gudahood! Xogta My Feed waxay kor u kacdaa 2000% gudaha 48 saacadood. Taasi waa dhiirigelin. Waxay macnaheedu tahay in akhristayaashu ay eegeen fiidyowga goofiga ah oo ay xiiseynayaan waxa ku jira.
Su’aashu waxay tahay ma haysan karaa iyaga?
Mahadsanid, uma maleynayo in Digg ay xumaan karaan suuqleyda xumaanta. Si kastaba ha noqotee, waa 'qodayaal' go'aamiya waxa ka dhigaya iyo waxa aan samayn. Suuqgeye ahaan, in kastoo, waxaa laga yaabaa inaan rabaa inaan xoogaa waqti iyo xoogaa geliyo waxyaabo madadaalo leh oo 'qodaya' oo erayga ka heli doona astaanteyda ama alaabteyda.
Tags: qoddigg saameyn
Godin: Dareenka iyo Falanqaynta
Xidigta Indianapolis ayaa la baaray Geerida ka dib markii ay u geeriyootay sawir qaade Mpozi Tolbert
Sep 21, 2006 at 5: 11 PM
Waxaan u arkaa Digg inuu u kobcayo siyaabo gaar ah oo runtii abuuraya hab soo jiidasho leh oo ku saabsan abuurista (iyo maaraynta) qulqulka wararka, qaab kasta oo uu yahay. Dad badan ayaa u arka inay tahay meel uun si ay uga soo baxaan xiriiryo jaban. Halka ay dadku runtii ka qayb qaadanayaan waa dhinaca bulshada ee aad ku faahfaahisay qoraalkaaga.
Nooc ka mid ah u arag sida mega-blog.
Sep 22, 2006 at 10: 33 AM
Waad ku mahadsantahay faallooyinka. Haa, waxaan u maleynayaa inaad saxantahay. Waxaan rajeynayaa in Digg uu ka faa'iideysto dhinacyada bulshada in kastoo. Qiimeynta faallooyinka waa muuqaal fiican… waa in si muuqata loo soo bandhigaa, in kastoo. Diggs-ka saaxiibku waa qabow yahay, laakiin u adeegsiga ku-wareejinta taag kale ayaa ka dhigaysa mid aan caan ahayn. Meel dahab ah ayaa ku jirta.
Waxa kale oo aan isku arkaa aniga oo ku wareersan sida loo doorto qayb. Aragtideyda shaqsiyadeed ee tan waa xadeynta qeybahooda ayaga ayaa dhaawacaysa. Waxaan aad u jeclaan lahaa inaan arko adeegsadayaashu inay awoodi karaan inay ku abaabulaan tags ka duwan qaybaha. Kadib, tusaale ahaan, waxaan raadin karay "CSS Fade" waxaanan la imid liiska maqaallada la qoday ee ku saabsan mowduucaas.
Digg wuxuu u eg yahay inuu haysto dul sabbayn dusha sare ah oo wali kamay faaidaysan dhinacyada B2B ee barta internetka. Kawaran hadaad qoddo qodob oo aad ku calaamadeysid "CRM Software"… qiyaas jawaabta!
Sep 22, 2006 at 2: 23 PM
Hits-kaygu sidoo kale waa booday, lambar aad u wanaagsan sababtoo ah Diggs-kii ugu dambeeyay.